:: My Little World ::: Gmail Themes and Nay Pyi Taw is notavaild City
Posted by Nay Nay Naing at 11/20/2008 06:33:00 PM
မကြာမီ လာမည်ကို မျှော်နေပါသည်။
ဟုတ်တယ် ကျနော့် ဂျီမေးအကောင့် ၂ခုမှာလည်း တခုမှာပဲ ပေါ်တယ်.နောက်တခုမှာမပေါ်ဘူးးး..
အခုတလော ဂူဂဲ တော်တော်သွက်နေတယ်နော်..
Ha Ha... Nay Pyi Daw is notavalid city...love it...
နောက် ဂျီမေးလ်မှာ Themeတွေ့လို့
Friday, November 21, 2008 2:20:00 AM
Nay Pyi Taw isavalid city
Gmail is so cute and so love....
ဘာဖြစ်လို့ Valid မဖြစ်တာလဲမသိဘူးနော်။ လူထုဆန္ဒခံယူပွဲရလဒ်လိုများလားမသိ။
Traditionally Nay Pyi Taw is the place where Queen or King resides. But there is no such person in so-called Nay Pyi Taw. The intelligent google is aware that fact, saying notavalid city, I think.
အရမ်းကောင်းတယ်.. စီပုံးမတွေ့လို့ ဒီမှာပဲ အော်မယ်နော့်
tech, life, ကဗျာတွေ, စာပေ, သီချင်း တော်တော်စုံစုံလင်လင်နဲ့ မိုက်တယ်..
တကယ် ဘဘောကျလို့ ပြောမိသွားတာ..
နောက်တစ်ရက်မှာပဲ Gmail အကောင့်အားလုံး Themes ပြောင်းလို့ ရသွားတယ်။ နေပြည်တော်က ဘာလို့valid မဖြစ်တာလဲ ဆိုတာ ကျွန်မ မသိဘူး.. မသိဘူး.. လုံးဝ လုံးဝ မသိဘူး...
အရမ်းကောင်တယ်ပြောသွားတဲ့ ကိုမောင်ပိစိ... အားပေးတာ ကျေးဇူးပါ။
Tuesday, November 25, 2008 12:56:00 AM